सन्दिप लामिछाने : सीपीएल खेल्न जानुअघि एक्कासी हिंडे अस्ट्रेलिया ! | NepalDut
सन्दिप लामिछाने : सीपीएल खेल्न जानुअघि एक्कासी हिंडे अस्ट्रेलिया !
भाद्र २ गते २०७६
सेप्टेम्बर-४ देखि वेस्टइन्डिजमा सुरु हुने क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएल टि-२० खेल्न वेस्टइन्डिज प्रस्थान गर्नु अघि विशेष कामले स्टार नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछाने आइतबर राति अस्ट्रेलियातर्फ प्रस्थान गरेका छन्।
गत हफ्ता क्यानडामा सम्पन्न ग्लोबल टि-२० क्यानडा प्रतियोगिता तथा त्यसअघि टि-२० विश्वकप छनौट ( एसिया फाइनल ) मा सहभागिता जनाएपछि सन्दिप १ हफ्ता नेपाल बसेका थिए। यस क्रममा सन्दीपले आफ्नो घर चितवन पुग्न भ्याए जहाँ हुने परिवारसंग रक्षा बन्धन मनाए।
अस्ट्रेलिया जानुको कारण यस्तो
केहि दिन अघि मात्रै अमेरिकी दुतावासले भिसा नदिंदा आक्रोसित ट्वीट गरेपछि चर्चामा आएका सन्दिपलाई दबाब पछि त्यसै दिन पुनः दुतावासले बोलाएर भिसा दिएको थियो। क्यारेबियन प्रिमियर लिगमा बार्बाडोस ट्रिडेन्टस टिममा रहेका सन्दिप सेप्टेम्बरको सुरुवातमा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। यस अघि अस्ट्रेलिया जाने चर्चा बाहिर थिएन।
सन्दिपका तथा नेपाली राष्ट्रिय टिमका व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीका अनुसार सन्दिप एक्कासी अस्ट्रेलिया जानुको कारण बिग ब्यास लिग हो। विकेटनेपालसंग कुरा गर्दै शिवाकोटीले डिसेम्बरमा सुरु हुने बिग ब्यास लिगमा सन्दिप खेल्ने टिमसंग सम्झौता हुनेछ।
“सन्दिप सेप्टेम्बर पहिलो हफ्ता वेस्टइन्डिज प्रस्थान गर्नेछन्। अस्ट्रेलियामा बिग ब्यासको यो सिजन खेल्ने टिम यो भ्रमणमा पक्का हुनेछ र सम्भवत भ्रमणको क्रममा सन्दिपले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन्।” शिवाकोटीले बताए।
अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नु अघि सन्दिप। फोटो – अनिश
गत सिजन पहिलो पटक बिग ब्यास खेल्न छनौट भएका सन्दिप मेलबर्न स्टार्सबाट खेलेका थिए। यो पटक पनि सन्दिप स्टार्सबाट खेल्ने सम्भावना रहेको शिवाकोटीले खुलाए।
यस अघि सन्दिप अमेरिका हुँदै वेस्टइन्डिज बार्बाडोस प्रस्थान गर्ने बताईए पनि अब अस्ट्रेलियाबाट सन्दिपको पायक अनुसार फ्लाइट छनौट गर्नेछन्।
यस अघि इन्डियन प्रिमियर लिगको यो सिजन खेलीसकेपछि मे महिनामा पनि सन्दिप अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका थिए। त्यसबेला भने सन्दिप अस्ट्रेलिया पुग्नुको खास कारण थिएन। त्यसबेला सन्दिप ३ हफ्ता अस्ट्रेलिया भ्रमण गरेका थिए। त्यस पटक पनि भ्रमणको कारण बिग ब्यास र अन्य योजनाहरु बताईएको थियो।
सन्दिप क्यारेबियन लिगमा बार्बाडोस ट्रिडेन्टसबाट खेल्दै छन् जुन टिममा जेसन होल्डर, वाहब रियाज, शाइ होप, एलेक्स हेल्स जस्ता क्रिकेटरहरु रहेका छन्। बार्बाडोसको पहिलो खेल ८ सेप्टेम्बरमा गुएना एमाजोन वारियर्स बिरुद्ध रहेको छ।
सन्दिपलाई बार्बाडोसले ७० हजार डलरमा जेठमा सम्पन्न ड्राफ्टमार्फत टिममा लिएको थियो। सीपीएल टि-२० को अघिल्लो सिजन सन्दिपलाई सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस प्याट्रीएट्सले खरिद गरेको थियो। सन्दिपले खेलेको विश्वभरको लिगमा अधिकारिक रुपमा घोषणा भएको मध्ये सन्दिपले पाएको यो सबैभन्दा धेरै मूल्य हो। बिग ब्यास लिगमा सन्दिपले ६०-७० हजार डलरको हाराहारीमा पाएको बताईए पनि अधिकारिक रुपमा भने मूल्य बाहिर आएको थिएन।
सीपीएल टि-२० को अघिल्लो सिजन सन्दिपले सेन्ट किट्स एण्ड नेभीस प्याट्रीएट्सको लागि ५ खेलमा कुल ७ विकेट लिएका थिए। सन्दिपको टिम गत सिजन लिग चरण अंकतालिकामा चौथो स्थानमा रहेको थियो भने दोश्रो क्वालीफायरमा पराजित हुँदै समग्रमा तेश्रो भएको थियो।
सीपीएल टि-२० मा कुल ६ टिम रहेका छन् जसमा सन्दिप खेल्ने बार्बाडोस संगै गुयना एमाजोन वारियर्स, जमैका तल्लावाज, सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस प्याट्रीएट्स, सेन्ट लुसिया स्टार्स र ट्रिन्बागो नाइट राइडर्स रहेका छन्।